Shan Shaqada ICU Bed
Toddoba Shaqo ICU Bed
Isku-dhafka 'Multifunction Eletric Bed'
Saddex Sariir oo Koronto Ku Shaqeysa
Laba Sariir Koronto oo Shaqeysa
Sariirta Daryeelka Guryaha Korantada
Buug gacmeedka Multifunction
Sedex Buug Buug Buug
Laba Buug Cuff Manual Bed
Sariirta Caruurta iyo Sariirta Dhallaanka
Qalabka kale ee Caawinta
Howlgalka Masraxa Gaadiidka Tiyaatarka
Seddex Buug Buug Buug ah
Laba shaqo oo Sariirta Korantada ah
DA-2 A3-Qaanuunka 1.Split Side Rails: 4pcs Wadooyinka dhinacyada ah ee loo yaqaan 'PP dhinacyada' waxay siisaa bukaanka kahortagida dhicitaanka. Qalabka Furaha ee Marmarsiinta ah: Si fudud looga saari karo oo u fududaaday jeermiska. Barxada joodariga ayaa raajo u samayn kara raajada gadaasha waxayna soo bandhigi karaan bukaanka raaxo badan. 3. Xirmooyinka Boodhadhka 3.H / F: Waxay xirayaan guddiyada sariirta ee ka hortagga shilalka si lama filaan ah uga saarida looxyada sariirta marka aad hogaamineyso ama qabaneyso sariirta. 4.Xargo geeska geeska ah 5.Qeyb dillaac ama godad faleebo ah 6.Marjiyeyaasha hareeya ...
DA-2 A2-Qaanuunka 1.Split Side Rails: 4pcs Wadooyinka dhinacyada ah ee loo yaqaan 'PP' jidadka dhinaceeda ayaa bukaan socodka ka ilaaliya dhicitaanka dhicitaanka. Qalabka Furaha ee Marmarsiinta ah: Si fudud looga saari karo oo u fududaaday jeermiska. Barxada joodariga ayaa raajo u samayn kara raajada gadaasha waxayna soo bandhigi karaan bukaanka raaxo badan. 3. Xirmooyinka Boodhadhka 3.H / F: Waxay xirayaan guddiyada sariirta ee ka hortagga shilalka si lama filaan ah uga saarida looxyada sariirta marka aad hogaamineyso ama qabaneyso sariirta. 4.Xargo geeska geeska ah 5.Qeyb dillaac ama godad faleebo ah 6.Marjiyeyaasha hareeya ...
DA-2 A1-Heerka qaabeynta 1.Split Side Rails: 4pcs Xirmooyinka dhinacyada HDPE waxay siinayaan bukaanka kahortaga dhicitaanka. Qalabka Furaha ee Marmarsiinta ah: Si fudud looga saari karo oo u fududaaday jeermiska. Barxada joodariga ayaa raajo u samayn kara raajada gadaasha waxayna soo bandhigi karaan bukaanka raaxo badan. 3. Xirmooyinka Boodhadhka 3.H / F: Waxay xirayaan guddiyada sariirta ee ka hortagga shilalka si lama filaan ah uga saarida looxyada sariirta marka aad hogaamineyso ama qabaneyso sariirta. 4.Xargo geeska geesta ah 5.Qeyb dillaac ama godad faleebo ah 6.Mattress Holde ...
Kusoo Dhawow Wargeyskeena
dhanka warbaahinta bulshada
Magaalada Dongshiduan Magaalada Xushui Gobolka Hebei ee Shiinaha
Hebei Pukang Qalabka Caafimaadka Co., Ltd.
Qeybta koowaad ee sahayda sariiraha ICU o ...
Hal maskax in laga hortago oo la xakameeyo buundada ...